मौद्रिक नीति विकास बैंकलाई सम्मान हुने गरी आउनुपर्छ
सीईओ, गण्डकी विकास बैंक
संघीयता कार्यान्वयन गर्न सबै स्थानीय तहमा बैंकिङ सेवा सुविधा विस्तार हुनुपर्ने आवश्यकता छ । यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले शाखाहरू खोल्दै आएका छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ पहुँच पुग्न सकेको छैन भने सहरी क्षेत्रमा भने आधुनिक बैंकिङ गतिविधि बढोत्तरी भएको पाइन्छ ।
प्रदेश नम्बर ७ मा बैंकका शाखा विस्तार गर्ने कार्यमा वित्तीय संस्थाहरूले ध्यान दिएको देखिन्छ । कास्कीको पोखरामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको गण्डकी विकास बैंक तीनवटा बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभिएर बनेको हो ।
विकास बैंक एसोसिएसनका सचिव तथा २०६६ सालदेखि गण्डकी विकास बैंक लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी रूपमा जिम्मेवारी सम्हाँल्दै आएका रेशमबहादुर थापासँग बैंकिङ क्षेत्रको समस्या, समाधान र चुनौतीका विषयमा कारोबार दैनिकका सम्वाददाता हिमेश बिकले गरेको कुराकानीको सार संक्षेप :
गण्डकी बिकास बैंकको कर्जा प्रवाहको अबस्था कस्तो छ ?
गण्डकी विकास बैंकको कर्जा प्रवाहको अवस्था अत्यन्तै राम्रो छ । जहाँ खराब कर्जाको अशं न्यून हुन्छ त्यहँ कर्जा प्रवाह राम्रो हुन्छ । चालू आवमा अपेक्षित रूपमा कर्जा प्रवाहमा वृद्धि हुन सकेन किनभने सेकेन्ड क्वार्टरपछि नेपालको सन्दर्भमा निक्षेपमा अपेक्षा गरेअनुसारको वृद्धि भएन । यस बैंकले १८ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ लेडिङ गरेको अवस्था छ । यस बैंकका हरेक पक्षहरू एकदमै सकारात्मक छ । हामी कर्जा प्रवाहको विषयमा बिकास बैंकका तुलनाहरूमा एकदमै अगाडि छौं ।
बैंकको अस्थिर ब्याजदरले उद्योग व्यवसायीहरू समस्यामा परेका छन्, के भन्नुहुन्छ ?
तपाईंले अहिलेको एकदमै जल्दोबल्दो प्रश्न गर्नुभयो । म पनि यो विषयमा उद्योगी व्यवसायीहरूलाई नेपालमा बैंकहरूले ब्याज दर बढाउँदा प्रतिकूल असर परेको स्वीकार गर्छु । ब्याजदरमा वृद्धि बैंकले नगरेको बुझिदिन उद्योगी व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्छु । देशमा समयमा पुँजीगत खर्च हुँदैन, समयमा हरेक कुराहरू हुन् नसक्नुको कारणले कहिले डिपोजिटको ग्रोथ कम हुनु र त्यही बजारमा कर्जाको डिमान्ड बढी हुनुले समस्या आएको हो । यिनै बैंक हुन जुन १ वर्ष अगाडि मुद्दतीमा ७ प्रतिशत दिने आज यिनै बैंक, वित्तीय संस्था मुद्दतीमा ११÷१२ प्रतिशत दिएका छन् । एक १ वर्ष अगाडि ९ देखि १२ प्रतिशतमा कर्जा प्रवाह पनि हामीले ग¥यौं भने अहिले १५÷१६ प्रतिशत पुगेको छ । बैंकको काम सुविधा दिने मात्र हो । जसले दिने र लिने बीचमा साक्षी रहेर काम गर्ने हो ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह किन अझै पनि हुन नसकेको हो ? यसका लागि नेपाल सरकारले कस्तो नीति लिनुपर्छ ।
उत्पादन क्षेत्रमा कर्जा लगानी नभएको हो भनेर मैले बुझँदिन् । जस्तो उत्पादन क्षेत्रमा अनिवार्य रूपमा १५ प्रतिशत पु¥याउनु पर्ने नियम छ । उत्पादनमूलक क्षेत्र भनेर कृषि, पर्यटन, शिक्षामा लगानी गर्नुपर्छ । हामीले साना तथा मझौला र घरेलु उद्योगमा लगानी गरेका छौं । यो अपेक्षा गरेअनुसार किन भएको छैन भने देशमा भर्खर–भर्खरै राजनीतिक स्थिरता हुँदैछ । लगानीकर्ताले जहिले पनि सुरक्षा खोज्छ र पुँजी हुने मान्छेलाई सम्मान गरिनुपर्छ ।
आजको दिनमा दुरदराजमा जाने विकास बैंक नै हुन् । गाउँमा विकास बैंक जाने नियम बनाएको छ तर त्यहाँको पैसा त्यही राख्न नपाउने नियम बनाएको छ । हिजोका दिनमा यो ऐन, नियम ठीक भए पनि अब परिमार्जन गरेर सजिलो बनाउनुपर्छ । यसमा राष्ट्र बैंकको ध्यान जाओस् । हामी चाँडोभन्दा चाँडो सेवा दिन आतुर छौं । सरकारले अब ल्याउने मौद्रिक नीतिमा विकास बैंकको सम्मान हुनुपर्छ । हामी केही गर्ने इच्छा हुँदाहुँदै पनि हात बाँधेर बस्नु पर्ने बाध्यतामा छौं ।
निक्षेप तथा कर्जाका कस्ता योजना छन् ?
गण्डकी विकासको कुरा गर्दा विभिन्न खाले प्रोडक्ट छन् । नारी बचत, ज्येष्ठ नागरिकदेखि मुद्दती खातामा पनि आकर्षण ब्याज छ । १२ प्रतिशत ब्याज दिएका छौं । हामी धेरै ब्याज दिएर निक्षेप संकलनको सोंचमा छैनौं । धेरै ब्याज दिए डिपोजिट गर्ने व्यक्ति मर्कामा पर्न सक्छ । हाम्रो रणनिती भनेको सन्तुलित हिसाबले जाने हो र समय सापेक्ष योजना ल्याउने लक्ष्य छ ।
बैंकको एबीबीएस, मोबाइल बैंकिङ, रेमिटयान्स सेवासहितको पूर्ण बैंकिङ सञ्चालनको प्रभावकारिता कस्तो छ ?
बैंकमा एबीबीएसको अवस्था एकदमै राम्रो छ । एटीएम प्रयोग गर्ने धेरै बढेका छन् । नेपालमा मोबाइल बैंकिङ सेवा प्रयोग गर्नेको संख्या भर्खरै बढ्दै गएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीमा विशेष लगानी गर्ने प्रक्रियामा जानुपर्छ । अबको बैंकिङ भनेको डिजिटल बैंकका रूपमा जाने हो । झोलामा धेरै व्यक्तिले पैसा बोक्न छाडिसकेका छन् । बैंकहरूलाई पुग्ने ठाउँमा पुगेको छैन पनि भन्छन् उता सहरभित्र पनि बैंक पुगेका ठाउँमा सेवाग्राहीहरू नआएको पनि पाइन्छ । बैंकले निकै नै फड्को मारेको छ नेपालमा पनि । सहरमा चेकभन्दा एटीएम प्रयोग गर्छन् ।
राष्ट्र बैंकले बैंकिङ सुशासन कमजोर भएको टिप्पणी गरेको छ । गण्डकी हकमा के छ ?
हरेक क्षेत्रमा सबैले राम्रो गर्नुपर्छ । सुशासन दिनुपर्छ । जहाँसम्म गण्डकी विकासको कुरा छ हामी सुशासनमा बसेको बैंक हो । हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेको सुशासन हो । सुशासनमा नबसे बैंकिङ क्षेत्र धरापमा पर्न सक्छ । राष्ट्र बैंकले पनि सुशासनमा नबसेका बैंकलाई चाँडोभन्दा चाँडो कारबाहीको दायरामा ल्यानुपर्छ । त्यसैले जनमानसमा नराम्रो असर पर्न सक्छ । राष्ट्र बैंकले पनि बैंकमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूलाई बैंक सुशासनका बारेमा जानकारी गराउनुपर्छ । बैंकले कति नाफा कमायोभन्दा पनि सुशासन नै महत्वपूर्ण कुरा हो । राष्ट्र बैंकको बैंकहरू प्रतिगिद्धे नजर हुनुपर्छ ।
बैंकको अबको कार्ययोजना के छ ?
अब राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंक बन्दै छौं । अझ योभन्दा धेरै दत्तचित भएर लाग्ने छौं । बैंकका जोखिमको बारेमा पनि सुक्ष्म अध्ययन पनि गरिरहेका छौं । अबका दिनमा सम्भाव्यता अध्ययन गरेर शाखा बिस्तार गर्ने तयारीमा छौं । जोखिमलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ लागेका छौं ।